Wararka - Talooyin ku saabsan isticmaalka muraayadaha indhaha
1) Xaaladaha caadiga ah, 8-40% iftiinka ayaa geli kara muraayadaha qorraxda. Dadka intooda badan waxay doortaan 15-25% muraayadaha indhaha. Dibadda, inta badan muraayadaha midabka beddela ayaa ku jira xadkan, laakiin gudbinta iftiinka muraayadaha ee soo saarayaasha kala duwan ayaa ka duwan. Muraayadaha beddela midabka madow waxay geli karaan 12% (dibadka) ilaa 75% (gudaha) iftiinka. Noocyada midabada khafiifka ah waxay geli karaan 35% (dibadda) ilaa 85% (gudaha) iftiinka. Si loo helo muraayado leh qoto dheer oo midab ku habboon iyo hadh, isticmaalayaashu waa inay isku dayaan dhowr nooc.
2) In kasta oo muraayadaha midabka beddela ay ku habboon yihiin isticmaalka maalinlaha ah, kuma habboona dhaqdhaqaaqyada isboortiga ee meelaha iftiinka leh, sida doomaha ama barafka. Heerka hadhka iyo qoto dheeraanta midabka muraayadaha qorraxda looma isticmaali karo cabbir ka ilaalinta UV. Muraayadaha, balaastikada ama muraayadaha polycarbonate ayaa ku daray kiimikooyin nuugaya iftiinka ultraviolet. Badanaa midab ma leh, xitaa muraayadda hufan waxay xannibi kartaa iftiinka ultraviolet ka dib daaweynta.
3) chromaticity iyo hadhka muraayadaha ayaa kala duwan. Muraayadaha muraayadaha leh ee iftiinka iftiinka iyo hooska dhexdhexaadka ah ayaa ku habboon xirashada maalinlaha ah. Xaaladaha iftiinka dhalaalaya ama ciyaaraha dibadda, waxaa lagu talinayaa in la doorto muraayadaha muraayadaha leh hooska xooggan.
4) Darajada hadhka ee lenska gradient dichroic ayaa si xidhiidh ah hoos ugu dhacaya kor ilaa hoos ama kor ilaa dhexe. Waxay indhaha ka ilaalin kartaa dhaldhalaalka marka dadku eegaan cirka, isla markaana si cad u arki karaan muuqaalka hoose. Xagga sare iyo hoose ee muraayadda labajibbaaran ee muraayadda waa midab madow, midabka dhexdana waa ka fudud yahay. Waxay si wax ku ool ah u muujin karaan dhaldhalaalka biyaha ama barafka. Waxaan kugula talineynaa inaadan isticmaalin muraayadaha noocan oo kale ah markaad baabuur wadid, sababtoo ah waxay lumin doonaan muraayadda.
Waqtiga boostada: Oct-28-2021
Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn, Muraayadaha Xisbiga, Muraayadaha Iftiinka Weyneeya,